HomeTURKEYGobolka Marmara34 IstanbulTallaabooyin dheeri ah oo looga soo horjeedo shilalka IETT Metrobus
09 / 10 / 2019 Levent Elmastaş 34 Istanbul, GUUD, WADADA, Nidaamyada Tire Wheels, Headline, Gobolka Marmara, Metrobus, TURKEY 0
Tallaabooyin dheeri ah oo looga soo horjeedo shilalka gawaarida metrobus
In kasta oo hoos u dhaca weyn ee 2019 ee shilalka Metrobus, IETT ay qiimeyn cusub ku sameysay laba shilal oo dhowaan dhacay. Madaxa guddiga kormeerka ayaa shaqsiyan loo xilsaaray inuu baaro shilalka. Khabiir ayaa laga codsaday Rugta Injineeriyada farsamada.
Metrobus, oo ku safreysa 7 kun jeer maalintii oo ay la socdaan 220 kun oo kiiloomitir oo wata xamuul gaaraya 1 milyan, waxay qabaneysaa shaqooyin culus si looga hortago shilalka. Ka dib shilalka ku dhacay khadka Metrobus ee Oktoobar, maamulka 6 iyo 8 IETT ayaa isu yimid si ay dib-u-qiimeyn ugu sameeyaan. Kuxigeenka Maamulaha guud ee IETT Hamdi Alper Kolukısa ayaa hogaaminayay kulanka, sababihii shilalka shilalka iyo talaabooyinka looga wada hadlay. Iyada oo ay la socdaan madax waaxeedyada, dhamaan maamulayaasha laxiriira IETT ayaa kulanka kasoo qeybgalay.
Maareeye kuxigeenka Guud Kolukısa wuxuu cadeeyay in baaritaan balaaran la bilaabay oo kusaabsan halka laga keenay shilalka wuxuuna cadeeyay in madaxa kormeerka uu shaqsi ahaantiisa loo xilsaaray baaritaanka maamulka. Kolukısa, Rugta injineeriyada farsamada ayaa sidoo kale dalbaday khabiir, ayuu raaciyay.
Intii kulanku socday, wadahadalada iyo wadayaasha gawaarida horay loo adeegsaday ayaa sidoo kale laga wada hadlay. Qaab-dhismeedka dhexdiisa dhexdeeda, waxaa la go'aamiyay in dib looga fiirsado tababbarradii la siiyay darawalada xagga caafimaadka ka wada iyo in la tixgaliyo saamiyadooda shilalka.
Dawladda Hoose ee Magaaladda Istanbul, shilalka shilalka gawaarida ayaa dhacay ka dib markii la kordhiyey tallaabooyinka, shilalka noocan oo kale ah si looga hortago "Nidaamka Digniinta ugu Horaysa" ayaa bilaabay in la hawlgeliyo.
Tallaabooyinka la qaaday darteed, marka loo eego xogta IETT, tirada shilalka qadka ayaa sidoo kale hoos u dhacaya. Tirada shilalka sanadaha waa sidan soo socota:
Tallaabooyin cusub oo ka dhan ah TCDD, dhimashada bini'aadamka iyo xayawaanka ayaa soo galaya tareenada. 22 / 03 / 2012 Waxaa la qorsheynayaa in looga hortago in noloshu ka luntay wakhti ka dib iyada oo ay ugu wacan tahay koox-ilaalinta oo ku dhisan hareeraha jidadka TCDD. TCDD 1. Sida laga soo xigtay xogta laga helay saraakiisha Waddooyinka Regional Railway, nidaamka xaydhka ee xayndaabyada waxaa lagu dabaqayaa meelaha ku xiran marka laga reebo isgoysyada. Marka laga soo tago cusboonaysiinta jidadka tareenada iyo qulqulayaasha la taaban karo sida waafaqsan Heerarka Iskuduwaha Caalamiga ah, TCDD waxay dareenka ilaalinta ammaanka jidka tareenka. Habkan, waxaa loogu talagalay in looga hortago dhimashada bini'aadamka iyo xayawaanka inaysan marin jidka tareenka. Edirne, mudnaanta waxaa la siiyaa meelaha hoyga ah ee qorraxdu sii socoto. Kooxuhu waxay sii wadi doonaan dadaalkooda ah inay kor u qaadaan amniga jidka tareenka ee gobollada loo qoondeeyay.
Cabbiraadyada isgoysyada heerarka hoose waxay yareeyaan shilalka 10 / 01 / 2012 Thanks to tallaabooyinka laga qaaday sanad -kii 10 ee ugu dambeeyay, shilalka wadooyinka iyo tirada dhimashada iyo dhaawaca shilalkan ayaa hoos u dhacay. Hannaanka, 78 boqolkiiba shilalka shilalka ee heerarka isgoysyada, 15 boqolkiiba kuwa lumiyay noloshooda iyo boqolkiiba 50 ee dhaawaca ayaa la dhimay. Sida laga soo xigtay Warbixinta Heerka Warbixinta Heer TCDD, shilalka heerarka isgoysyada ayaa hoos u dhacay, laakiin natiijada, waxay ka mid yihiin dhibaatooyinka ugu muhiimsan ee TCDD. Marka loo eego tirakoobyada, dadka 600 waxay u dhintaan sanad walba shilalka heerarka wadooyinka ee Europe. Marka loo eego Ururka Caalamiga ah ee Railways (UIC), 95 ayaa ka masuul ah dadka isticmaala wadooyinka
Cabbiraadyada ka soo horjeeda kalluumeysiga shidaalka 26 / 12 / 2012 Wasiirka Ganacsiga iyo Ganacsiga Hayati Yazici, oo diyaar u ah in ay ka hortagto tahriibinta shidaalka ee sharci qabyada ah, halkii bamka ku lugta lahaanshaha ee dhammaan dhismaha ayaa la shaabadeeyn doonaa, "Dastuurka qabyada ah ee soo rogay sharci-galinta sharci-darrada sharci-darrada ah ee tahriibinta. , tallaabo muhiim ah ayaa loo qaadi doonaa si loo ilaaliyo bay'ada iyo caafimaadka bini'aadamka, "ayuu yiri. Wasiirka Ganacsiga iyo Ganacsiga Hayati Yazici, Xarunta Bulshada ee TOBB shir saxaafadeed ayaa lagu soo bandhigay tallaabooyinka la qaadey si loo shido tahriibinta. Raisal Wasaaraha Qalabka 2012 / 19 wuxuu dhigayaa in qorshe muhiim ah lagu sameeyey dagaalka lagula jiro tahriibinta shidaalka ...
Nidaamka Metrobus ee New Delhi ayaa keenay dadka hodanka ah iyo kuwa saboolka ah 11 / 07 / 2012 Ma xal u keenay Turkey ee gaadiidka, ama hirgelinta cidhiidhi ee haad taraafig ay sabab u buux, iyo sidoo kale kuwa kortaan Metrobus hoostiisa dood ma yihiin kuwo aad u qanacsan, sidoo kale hoggaamiyay halgankii fasalka ee Hindiya. dimuqraadiyadda ugu daawashada adduunka ayaa, magaalada Metrobus nidaamka gaadiidka la mid ah India ee xal u hesho dhibaatooyinka gaadiidka ee New Delhi, milkiilaha gaariga khaaska ah a soo dadka dakhliga hoose iyo kuwa dhexe isticmaalaa gaadiidka dadweynaha mid taajir ahaa. Tan iyo markii ay dhamaystirka in 2008 oo sababay muran weyn waddada "Bus Rapid Transit" (OHT), waxa ay haatan u ahayd barxadda codsiga ah ee milkiilayaasha baabuurta gaarka loo leeyahay. Kiiskii koowaad waa mid gaar ah
Sharaxaadda Metrobus ee IETT
News Archive Xulo bisha Oktoobar 2019 (218) Sebtembar 2019 (555) August 2019 (508) July 2019 (634) Juun 2019 (504) May 2019 (526) Abriil 2019 (418) Maarso 2019 (521) Febraayo 2019 (483) Janaayo 2019 (502) Range 2018 (620) Nofeembar 2018 (504) Oktoobar 2018 (435) Sebtembar 2018 (517) August 2018 (486) July 2018 (506) Juun 2018 (581) May 2018 (467) Abriil 2018 (545) Maarso 2018 (554) Febraayo 2018 (500) Janaayo 2018 (557) Range 2017 (509) Nofeembar 2017 (427) Oktoobar 2017 (538) Sebtembar 2017 (455) August 2017 (505) July 2017 (479) Juun 2017 (477) May 2017 (493) Abriil 2017 (434) Maarso 2017 (540) Febraayo 2017 (477) Janaayo 2017 (538) Range 2016 (487) Nofeembar 2016 (631) Oktoobar 2016 (657) Sebtembar 2016 (542) August 2016 (608) July 2016 (485) Juun 2016 (661) May 2016 (664) Abriil 2016 (700) Maarso 2016 (804) Febraayo 2016 (855) Janaayo 2016 (751) Range 2015 (799) Nofeembar 2015 (640) Oktoobar 2015 (624) Sebtembar 2015 (428) August 2015 (493) July 2015 (505) Juun 2015 (535) May 2015 (577) Abriil 2015 (622) Maarso 2015 (1017) Febraayo 2015 (878) Janaayo 2015 (1077) Range 2014 (963) Nofeembar 2014 (826) Oktoobar 2014 (771) Sebtembar 2014 (598) August 2014 (808) July 2014 (911) Juun 2014 (735) May 2014 (957) Abriil 2014 (972) Maarso 2014 (864) Febraayo 2014 (720) Janaayo 2014 (733) Range 2013 (664) Nofeembar 2013 (656) Oktoobar 2013 (548) Sebtembar 2013 (570) August 2013 (533) July 2013 (661) Juun 2013 (577) May 2013 (734) Abriil 2013 (1059) Maarso 2013 (1102) Febraayo 2013 (811) Janaayo 2013 (906) Range 2012 (911) Nofeembar 2012 (1168) Oktoobar 2012 (830) Sebtembar 2012 (886) August 2012 (974) July 2012 (863) Juun 2012 (591) May 2012 (445) Abriil 2012 (563) Maarso 2012 (699) Febraayo 2012 (546) Janaayo 2012 (417) Range 2011 (149) Nofeembar 2011 (35) Oktoobar 2011 (23) Sebtembar 2011 (18) August 2011 (25) July 2011 (18) Juun 2011 (16) May 2011 (13) Abriil 2011 (13) Maarso 2011 (33) Febraayo 2011 (24) Janaayo 2011 (13) Range 2010 (335) Nofeembar 2010 (12) Oktoobar 2010 (15) Sebtembar 2010 (12) August 2010 (16) July 2010 (9) Juun 2010 (19) May 2010 (6) Abriil 2010 (3) Maarso 2010 (62) Febraayo 2010 (303) Janaayo 2010 (1838) Range 2009 (4) Nofeembar 2009 (1) Oktoobar 2009 (3) Sebtembar 2009 (3) August 2009 (2) Juun 2009 (3) May 2009 (2) Abriil 2009 (3) Maarso 2009 (9) Febraayo 2009 (4) Janaayo 2009 (3) Nofeembar 2008 (1) Oktoobar 2008 (1) Sebtembar 2008 (2) August 2008 (1) July 2008 (2) Juun 2008 (2) May 2008 (2) Abriil 2008 (1) Maarso 2008 (3) Febraayo 2008 (5) Janaayo 2008 (2) Range 2007 (2) Oktoobar 2007 (2) July 2007 (1) May 2007 (1) Abriil 2007 (1) Febraayo 2007 (2) Janaayo 2007 (1) Range 2006 (1) Oktoobar 2006 (3) August 2006 (1) Juun 2006 (2) May 2006 (2) Abriil 2006 (2) Maarso 2006 (2) Nofeembar 2005 (2) August 2005 (1) Juun 2005 (1) Maarso 2005 (2) Febraayo 2005 (1) Janaayo 2005 (1) Range 2004 (1) Oktoobar 2004 (3) July 2004 (1) May 2004 (2) Range 2003 (1) Oktoobar 2003 (1) May 2003 (1) Maarso 2003 (1) Febraayo 2003 (1) Janaayo 2003 (1) Range 2002 (1) Oktoobar 2002 (4) August 2002 (1) Abriil 2002 (1) Maarso 2002 (2) Janaayo 2002 (2) July 2001 (1) Juun 2001 (1) Maarso 2001 (1) May 2000 (3) Maarso 1999 (1) Oktoobar 1998 (2) Maarso 1998 (1) August 1997 (1) Oktoobar 1996 (1) August 1996 (2) May 1995 (1) August 1992 (1) May 1990 (1)